Shiinaha Custom logo Handmade Paper Jewelry Box Qabanqaabiyaha oo leh Muraayad Muraayad ring Earring Sanduuqa dahabka Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Huaguang
Calaamadda Custom Handmade Paper Jewelry Box Qabanqaabiyaha oo leh Muraayadda Muraayadda Muraayadda Dhagaha Qurxinta
Abaabulaha Sanduuqa Dahabka oo leh Muraayad
Cabir: La habeeyay
Sameynta iyo soo saarida sanaadiiqda dahabka waxay ku saleysan yihiin ikhtiraaca dahabka. Gudaha guud ahaan waxaa loogu talagalay kala-dheellitirnaan fara badan si looga hortago xagashada aan loo baahnayn ee ay keento taabashada dahabka. Sanduuqyada dahabka qaarkood waxay ku kala duwan yihiin qaabdhismeedka gudaha iyadoo loo eegayo qaababka iyo walxaha gaarka ah. Adeegsiga ugu weyn ee sanduuqa dahabka, si loo ilaaliyo dahabka oo u eg saamayn muuqaal cusub, looga hortago boodhka iyo walxaha ku jira hawada dusha sare ee daxalka iyo xirashada, iyo sidoo kale in la siiyo soo-ururiyayaasha dahabku jecel yihiin meel wanaagsan oo la helo.
Badanaa waxaa lagu dhejiyaa waxyaabo jilicsan waxaana ku jira anti-oksidheynta iyo fiilooyinka kahortagga dharka si looga hortago xirashada dahabka. Furaha ama qufulka isku dhafan ee qaabka u dhigma ayaa loo xiraa si loo ilaaliyo amniga dahabka. Sanduuqa dahabka ee waraaqda ayaa badanaa loogu talagalay carruurta inay soo ururiyaan qalabyada yaryar, sidaas darteed ma jiro quful. Sanduuqa dahabka ee waraaqaha, jawi ahaan u fiican, qiimaha ayaa ka wanaagsan. Naqshadaynta casaanka sidoo kale waxay la socotaa gabadha yar qalbigeeda, sida haddii ay ku jirto sanduuqan dahabka ah, waa gabar yar oo qurux badan. Tani waa shimbir yar-sanduuq yar yar, laakiin waxay leedahay dhammaan howlaha lagama maarmaanka u ah:
Loogu talagalay in lagu sugo oo la ilaaliyo giraantaada qaaliga ah, suunka giraantu badanaa wuxuu ka kooban yahay xirmo fiiqan oo flannelette ah oo isbuugyo ah. Marka lagu daro giraanta, iskudhafka ama dhegaha sidoo kale waa xulasho wanaagsan.
Daloolinta / gogosha dhegaha gogosha ayaa loo isticmaalaa hagaajinta iyo ilaalinta qalabka dhegaha. Badanaa waxaa la siiyaa godad dhegaha ah oo ku yaal qaybta si loo qabto dhegaha, ama xargaha silsiladaha lagu xiro iyadoo la isticmaalayo booska daboolka sanduuqa, ama suufka laga saari karo ee leh godadka dhegaha ee qaybta.
Suufka daboolaya kaarka balanbaalisku waa sida caadiga ah flannelette leh kaar balanbaalis ah oo lagu dhisay qayb lagu daboolayo dahabkaaga qaaliga ah. Kaadhadhka balanbaalista waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya xajin, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu duubo silsiladahaaga dheer iyo kuwa khafiifka ah si looga hortago is rogrog aan kala sooc lahayn; Ama u dhaqmo sida lakab, adoo kala soocaya tuwaaladaada dusha sare.
Duub / jijin Dumaan waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo oo lagu ilaaliyo jijin ama saacad.
Jillaab silsilad ayaa loo isticmaalaa in lagu sugo lagana ilaaliyo jijiskaaga silsiladda, badanaa qaab isku-xirnaan ama xajin. Waxyaabaha soo socda ayaa badanaa lagu qaabeeyaa kiish jilicsan oo furan si loo qabto silsiladda silsiladda ah.
Cubicles waxaa loogu talagalay cabbirro iyo qaabab kala duwan, si dahabkaaga qaaliga ah si gooni gooni ah loo dhigo. Silsilado dhaadheer iyo kuwa khafiif ah ayaa badanaa loogu talagalay silsilado, halka kuwa laba jibbaaran loogu talagalay jijimooyin, jiqado, hilqado, timo gogol, xirxirayaal iyo qalab kale oo ku xiran cabirka iyo hooska.
Gabar yar maxay jeclaan laheyd sanduuqa dahabka sidan oo kale ah?
Hore: Sanduuqa carruurta lagu ciyaaro ee loogu talagalay carruurta boorsada warqadda kartoonada leh ee gacanta lagu hayo
Xiga: Xafiiska ama sanduuqa keydinta warqadda guriga oo leh awood ballaaran waa la laaban karaa
Kartoonada Jewelry Box Gabdhaha dahabka ...
Kartoonada Qurxinta Sanduuqa ama Sanduuqa Qurxinta ee Muraayadda ...